के मास्क धोएर लाउन मिल्छ ? दिनदिनै फेर्नुपर्छ कि एउटै लगाइरहे हुन्छ ? तपाई पनि थाहा पाउनुहोस । – Yuwa Aawaj
जेठ २७, २०७८ बिहिबार 1091
Prevबिदेश बाट आउनेको लागि यस्तो नियम: आफ्नै खर्चमा दुईपटक पीसी आर गर्नुपर्ने !
Next‘जिउँदो ला’श’ बनेको ३ वर्षपछि मोडल निशा घिमिरेको उ’द्धार ।
बधाई ! सगरमाथा आरोहणमा गएका दृष्टिविहीन अमिट केसीद्वारा ६ हजार मिटरको सफल आरोहण ।